Time-Lapse bụ a Usoro nke ẹsụhọde ọsọ ma ọ bụ ugboro ole nke video ma ọ bụ foto Mgbe na-ewere ma ọ bụ agbapụ ndị video. Otu echiche nke ngagharị na-kere na enyemaka nke nsụgharị dị iche iche nke software. Eku ọnụego bụ ejikari ala karịa onye na-eji mgbe ị na-elele na clip.
Time-Lapse ọzọ bụ ma ọ bụ obere na-abụghị nke ngwa ngwa ngagharị foto.
Mgbe i nwere ọtụtụ foto na nwere ike ị chọrọ ka ha na-egosi na usoro nke N'egbughị ruo ogologo oge nke oge ịpụta ihe na-eme ruo ogologo oge. Dịka oghere nke a ifuru osisi.
Nke a na Usoro a na-eji weghara a nnukwu ìgwè mmadụ nke ndị mmadụ, na-akpụ akpụ okporo ụzọ na ndị ọzọ na aghụghọ usoro dị ka ọwụwa anyanwụ.
Nkebi nke 1: a bụ ndu na-eke a Time-Lapse iji iMovie
Part 2: Olee ka a Time-Lapse na iMovie on Mac
Nkebi nke 3: Olee ka a Time-Lapse na iMovie on iPhone / iPad
Nkebi nke 4: Olee ka a Time-Lapse on Windows
Were video eji gị igwefoto (ogologo-adabere n'ebe ị).
Jikọọ gị igwefoto gị na kọmputa mbubata video.
Ịdọrọ video ka usoro iheomume (eji (+) button na ala n'akụkụ nke oru ngo n'ọbá akwụkwọ).
Ugboro abụọ click na clip.
Na faịlụ menu, pịa na oru ngo Njirimara icon, na ịtọ oge nke mgbanwe dị ka kwa mmasị gị na dapụtara soja window.
Gbanwee mmịfe ka kacha ma ọ bụ pịnye uru iji kwekọọ gị chọrọ ntọala.
Mbupụ gị dezie video site na ịpị òkè bọtịnụ.
Ị nwere ike mbupụ ya dị ka a nkiri ma ọ bụ ịkọrọ ya gafee dị iche iche internet nyiwe.
Nweta foto ma ọ bụ dekọọ a video nke a oge ị chọrọ iji na a na oru ngo, ma site na-ewere photos na Time-Lapse mwube on.
Mbubata gị video gị Mac iji image kpọọ.
Ẹkedori iMovie, mgbe ahụ,.
Mbubata video ugbu a.
Ịdọrọ video ngo n'ọbá akwụkwọ.
Họrọ footage ị ga-eji na ịdọrọ na dobe ya ndị usoro iheomume.
Onye soja window Pop elu (ebe a ị nwere ike ịgbanwe ọsọ ntọala).
Export na ịkọrọ gị ọrụ.
Mere nke ọma gị ngo bụ ọma zuru ezu.
Na ekwentị gị ị nwere ike ịmepụta a Time-Lapse clip-enweghị mgbagwoju nke dị oké ọnụ video ngwá ma ọ bụ software. Niile ị chọrọ bụ iMovie arụnyere na gị na iPhone ma ọ bụ iPad na-eso ndị na-esonụ na-esi na-aga banyere.
Ndị na-esonụ emetụta iPhone 6 ma ọ bụ 6 Plus.
Akpa, ị chọrọ ẹkedori igwefoto ngwa site na ịme ọpịpị igwefoto na akara ngosi na ekwentị ihuenyo.
Chọpụta iPhone Time-Lapse mode site swiping aka nri (na-emekarị emi odude na ala nke ihuenyo).
Dekọọ video (enweta na ndekọ button na-amalite gị Time-Lapse).
Kpatụ ndekọ button ọzọ na-akwụsị ndị Time-Lapse.
Ihe video ga-azọpụta na foto ngwa nchekwa.
Oge Gị-Lapse video dị njikere-ele ya anya ugbu a.
Edezi a video on Windows bụghị a ike ọrụ dị ka e nwere ọtụtụ edezi ngwaọrụ na ị nwere ike iji. Ịmepụta Time-Lapse na gị video on Windows i nwere ike iji MOVAVI ma ọ bụ Windows Movie onye.
Ọ bụ a nkiri Ndinam software na dị maka free si Microsoft Download Center. Ndị okenye version na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ simplified usoro, mgbe ahụ, ndị ọhụrụ version ga-abụ nnọọ na-enye aka.
Ọ bụ ihe dị mfe video edezi software na a kenha interface nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ị ike Time-Lapse na obere mgbalị.
Ẹkedori ngwa (windows nkiri onye) si omume menu.
Melite mmasị gị site na nhọrọ mkparịta ụka window si ngwaọrụ menu dị ka ndị a.
Nịm oge ị chọrọ ndise-adịru n'oge slide na-egosi n'okpuru elu taabụ (ndabara bụ 0,125 sekọnd) ị nwere ike ịtọ a mgbe e mesịrị na maka chọrọ ọsọ.
Iji kpatụ maka iche iche ihuenyo nha i nwere ike ịgbanwe format ruru ka 4: 3 ma ọ bụ 16: 9 n'okpuru video Njirimara ngalaba.
Mbubata foto gị site na menu na n'elu aka ekpe nke nkiri onye ihuenyo.
Chọpụta na ọnọdụ ebe ị echekwara gị faịlụ na mara ha.
Họrọ niile faịlụ na Ibu Ibu ha n'ime usoro iheomume.
Iji nwere a mata ihe na-atụ anya, pịa na play button.
Windows nkiri onye ga mpikota onu gị faịlụ na-akpaghị aka n'ihi na ị.
Pịa na-ebipụta na-esonụ window.
Họrọ ebe ịzọpụta faịlụ.
Họrọ mkpakọ format ị chọrọ site na nhọrọ wedaa menu.
Hichapụ niile foto site na usoro iheomume na mbubata video.
Ịdọrọ video ka usoro iheomume.
Pịa na mmetụta na-ekpe panel nke ihuenyo.
Ikpuru adị ruo okpukpu abụọ nke video na usoro iheomume.
Zọpụta video ugbu a.
Top 20 iMovie gburugburu / ndebiri maka Mac ọrụ
> Resource> iMovie> Olee otú Mee a Time-Lapse Movie na iMovie